wa lay: “မျှော်လင့်ချက် မြို့ငယ်လေး”
လူတစ်ယောက် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာဟာ ထိုလူရှဲ့ဇာတိချက်မြုပ်နေရာ ထိုလူရဲ့ အတိတ်သမ်ိုင်းကို စတင်ပုံဖေါ်ရာ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ မြို့ကြီးတွေမှာ တစ်ချို့တွေကတော့ တောရွာဇနပုဒ်တွေမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာကြလေရဲ့။ကျွန်မကိုတော့ တောမကျ မြို့မကျ ပြောရမယ့် စက်ရုံဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်စုလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာလေးကို ကျွန်မအသည်းနှလုံးထဲမှ မျှော်လင့်ခြင်း မြို့ငယ်လေးဟု တင်စားထားသည်။ မိုးမျှော်အဆောက်အအုံကြီးတွေမရှိ..ရိုလာကိုစတာတွေမရှိ…အင်တာနက်ဆိုင်တွေမရှိ...စူပါမားကက်ကြီးတွေမရှိ..ဥယျာဉ်ကြီးတွေမရှိ…ရဲစခန်းမရှိ…ဟိုတယ်မော်တယ်များမရှိ…သို့ပေမယ့် ထိုနေရာလေးဟာ ကျွန်မအတွက် အလုံခြုံအနွေးထွေးဆုံး စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံး နေရာလေးပါ။
ထိုမြို့ငယ်လေးတွင် ကျွန်မကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျွန်မ၏ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော အတိတ်ပုံရိပ်များ ရှိသည်။ ကျွန်မ၏ ငယ်ဘဝကို ထိုနေရာမှာပင် ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ထိုနေရာလေးတွင် ကျွန်မ၏ ချစ်ခင်ကျွမ်းဝင်ရသော မိသားစု ငယ်သူငယ်ချင်းများ အိမ်နီးနားချင်းများ အသိများ ရှိသည်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသော ခံစားချက်ကို မြို့ငယ်လေး၏ နေရာတိုင်းတွင် ကျွန်မခံစားရသည်။
ကျွန်မရဲ့ မြို့ငယ်လေးဟာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ခြင်း ပေါ့ပါးသွက်လက်ခြင်း ငြိမ်းချမ်းခြင်းစတဲ့ အသွင်များဆောင်ထားတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးပါ။ နံနက်စောစော လင်းအရုဏ်မှာဆိုလျှင်ဖြင့် မြို့ငယ်လေးရဲ့ တစ်ဆိုင်တည်းသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ တရားသံကို ကြားနိုင်လေသည်။ တခြားရွာတွေ မြို့တွေလိုမဟုတ် မောင်းတုံးခေါက်သံ ကြက်တွန်သံ ဘတ်စ်ကားလူခေါ်သံ နှိုးစက်သံတွေအစား ဒီပင်မလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှ တရားသံက မြို့ငယ်လေးမှ လူတွေရဲ့ ပုံမှန်နှိုးစက်တာဝန်ကို ယူထားလေရဲ့။ နံနက်စောစော (၆) နာရီဆိုလျှင် မြို့ငယ်လေးရဲ့ အလယ်ပိုင်းမှ ဈေးလေးမှာ လူတွေစည်နေပြီ။ နံနက် (၈) နာရီထိုးလျှင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မည့် လင်ယောကျာ်းအတွက် ဝယ်ခြမ်းချက်ပြုတ်ပေးရန် အိမ်ရှင်မများ ဈေးသို့ ခပ်သုတ်သုတ်လာကြသည်။ ကျွန်မရဲ့ မြို့ငယ်လေးမှာ မြို့ကြီးတွေလို ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သိရန်သတင်းစာမလို။ ဈေးတွင် အသားငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဝယ်ယူနိုင်ရုံမက မြိုငယ်လေး၏ သတင်းများကိုလည်း နားစွင့်နိုင်သည်။ ဈေးလေးမှာ ဖော်ရွေရင်းနှီးစွာ ခေါ်သံ နှုတ်ဆက်သံ..ရယ်မောသံ တွတ်ထိုးသံ များက ဆည်းလည်းသံများပမာ ချိုမြနေတတ်သည်။
(၈) နာရီထိုးလျှင် ဖယ်ရီကားကြီးများက မြို့ငယ်လေးအနှံ့လှည့်ပြီး ဝန်ထမ်းများကို ကြိုနေကျဖြစ်သည်။ ကျွန်မငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ အိမ်ရှေ့တွင် ဟွန်းတီးသံရောက်လာလျှင် ကျွန်မက အဖေ့ရဲ့ ထမင်းဘူးကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင် အခြားတစ်ဖက်မှ အဖေ့လက်ကို မြဲစွာဆုပ်ကိုင်ပြီး အဖေ့ကို ခြံအပေါက်ဝထိ လိုက်ပို့နေကျဖြစ်သည်။ အဖေ့ကို တာ့တာပြလိုက် ဖယ်ရီကားကြီးပေါ်မှ ပြုံးရွှင်နေသော ဦးလေးကြီးများကို တာ့တာပြလိုက်ဖြင့် ကျွန်မမှာ ကားကြီးမထွက်သရွေ့ တာ့တာပြလို့ မဆုံးတော့ပေ။
ကျွန်မတို့ မြို့လေး၏ ကျက်သရေဆောင်နေရာဆိုလျှင် မြို့လေး၏ တစ်ခုတည်းသော ကျောင်းလေးမှာ လက်ညှိုးထိုးစရာထဲမှ တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သွပ်မိုး အုတ်ကာဖြင့် မူလတန်းအတွက် တစ်ထပ်အဆောက်အအုံလေး အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းအတွက် နှစ်ထပ်အဆောက်အအုံလေးက သေသေသပ်သပ်လေးရှိနေသည်။ ကျောင်း၏ ပင်မဝင်းထဲသို့ ဝင်လျှင်ဖြင့် လွမ်းမောဖွယ်ရာ စိန်ပန်းပင်ကြီးကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အရိပ်ရသစ်ပင်ကြီးများနှင့် ကျွန်မတို့ကျောင်းလေးသည် ဘာပကာသနအဆောင်အယောင်တွေမှမပါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ခန့်ညားနေသည်။ နံနက် (၈) နာရီခွဲဆိုလျှင်ဖြင့် ကျောင်းလေး၏ ချိုမြသော ခေါင်းလောင်းသံကို ကြားနိုင်ပါရဲ့။ ထိုအသံနှင့်အတူ အဖြူအစိမ်းဝတ် ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများ စာသင်ခန်းဆီသို့ ပြေးလွှားနေတာကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ပြီးလျှင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ စာအံသံများကို စည်းချက်ညီညီကြားရမည် ဖြစ်သည်။ မြို့ပြကြီးများမှ ကျောင်းကြီးများနှင့် ယှဉ်သော် အလွန်သေးငယ်ကာ မထည်ဝါသော်ငြားလည်း ထိုကျောင်းလေးသည် ကျွန်မတို့ ဝန်ထမ်းမိသားစုမှ ကလေးများ၏ တစ်ခုတည်းသော ပညာရည်နို့သောက်စို့ရာ အနာဂတ်ကို စတင်ပုံဖော်ရာ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်များ မြုပ်နှံရာ ချစ်စဖွယ် နေရာလေးပင် ဖြစ်သည်။
မြို့လေး၏ ကျက်သရေဆောင်နေရာတွေထဲမှာ မိုးကောင်းစေတီ နှင့် ရွာဦးကျောင်းစေတီဟု သမုတ်ထားသော စေတီနှစ်ဆူမှာ မပါမဖြစ်ပင် ဖြစ်သည်။ မိုးကောင်းစေတီသည် ကျွန်မတို့မြို့ငယ်လေး၏ မြောက်စူးစူးအရပ်တွင် တည်ရှိပြီး ရွာဦးကျောင်းစေတီကတော့ အနောက်စူးစူးအရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ မိုးကောင်းစေတီအနားတစ်ဝိုက်တွင် ကြာကန်တစ်ခုရှိပြီး ကန်အလယ်တွင် နဂါးရုံဘုရားတည်ကာ မိုးကောင်းစေတီနှင့် နဂါးရုံဘုရားအား သစ်သားတံတားလေးဖြင့် သွယ်တန်းထားသည်။ ညနေခင်းအချိန်များဆိုလျှင် ထိုတံတားလေးတွင် ဘုရားလာဖူးကြသော ချစ်သူစုံတွဲများဖြင့် စည်နေတတ်သည်။ စွေးမြမြနီနေသော နေလုံးကြီးနှင့် အတူ လှပစွာဖူးပွင့်နေသော ကြာပန်းများနှင့်အတူ စိမ်းမြနေသော ရေကန်ကြီးနှင့်အတူ သစ်သားတံတားလေးပေါ်တွင် တွတ်ထိုးနေကြသော ချစ်သူစုံတွဲများဖြင့် ထိုနေရာလေးဟာ ပန်းချီဆရာများအတွက် ပန်းချီဆွဲချင်စရာနေရာလေးပင် ဖြစ်သည်။
အနောက်စူးစူးတွင် ရှိသော ရွာဦးကျောင်းစေတီကတော့ တောင်ကုန်းမို့မို့လေးပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုစေတီသို့ သွားလိုလျှင် ကုန်းတစ်ခုဆင်းရပြီး မတ်စောက်သော ကုန်းတစ်ခုကို တက်ရသည်။ ကျွန်မ သွားရန်အနှစ်သက်ဆုံးသော နေရာလေးဖြစ်သည်။ ကုန်းစောင်းပတ်လည်များတွင် ကျွန်မတို့ မြို့ငယ်လေးနှင့် ရွာနီးစပ်ချုပ်များမှ တောင်သူဦးကြီးများ လာရောက်စိုက်ထားသော ပဲဇင်းငုံခင်းများဖြင့် စိမ်းစမ်းလန်းလန်းရှိနေတတ်သည်။ ပဲဇင်းငုံခင်းများ အလယ်တွင် အရိပ်ရ ဇီးပင်များ မာလကာပင်များ ရှိတတ်သည်။ ကလေးတော်တော်များများ ဘုရားလည်းဖူးရင်း ဇီးသီး မာလကာသီးများစားရအောင် တပျော်တပါး လာတတ်ကြသည်။ ပဲဇင်းငုံခင်းစပ်များတွင်တော့ တောပန်းရိုင်းများ ပေါက်နေတတ်သည်။ ညနေခင်းတွင် ပဲဇင်းငုံခင်းမှ ဖြတ်တိုက်လာသော လေပြေလေညှင်းများအကြား တောပန်းရိုင်းများ ယိမ်းနွဲ့နေသည်မှာ အတော်ပင် လှသည်။ တစ်ကုန်းဆင်း တစ်ကုန်းတက်ဖြင့် တောင်ကုန်းပေါ်မှ စေတီသို့ ရောက်လျှင်ဖြင့် မောပန်းခဲ့သည်များ ပြေပျောက်သွားရမြဲဖြစ်သည်။ စေတီကို တံတိုင်းအဖြစ်ကာရံထားသော အုတ်နံရံကြီးများ ပတ်လည်တွင် စက်ရုံမိသားစုများ၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မိမိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ကုသိုလ်ပြုကာ အားလုံး၏ စုပေါင်းအားဖြင့်တည်ရှိခဲ့သော ထိုစေတီကို ဖူးရသည့် ပီတိမှာ အတော်ပင် ကြည်နူးစရာကောင်းလှသည်။
မြို့လေး၏ အလယ်တွင် တည်ရှိသော ဘောလုံးကွင်းကတော့ မြို့လေး၏ အားကစားမောင်မယ်များ မွေးထုတ်ပေးရာနေရာဖြစ်သည်။ မြက်ခင်းနုနုစိမ်းစိမ်းများ ပေါက်နေသော အတော်အသင့်ကျယ်ပြန့်သော ကွင်းပြင်ကြီးက အားကစားဝါသနာပါသူ မြို့သူမြို့သားများအတွက် ကောင်းမွန်သော နေရာလေးဖြစ်သည်။ ညနေခင်းများတွင် ခြင်းလုံးပွဲများ ဘောလုံးပွဲအသေးစားလေးများကို တွေ့နိုင်သည်။ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေသော ကလေးများကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ လာရောက်ပြီး စက်ဘီးစီးကြသူများ လမ်းလျှောက်ကြသူများဖြင့်လည်း စည်ကားနေတတ်သည်။
ကျွန်မ မြို့ငယ်လေး၏ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းသော နေရာများမှာ ပုံမှန် မထူးခြားသော နေရာလေးများသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုနေရာလေးများသည်ပင် ကျွန်မကို ဆွဲဆောင်ထားသော နေရာလေးများ ဖြစ်သည်။ သို့ပေသိ ထိုအရာများထက် ကျော်လွန်ကာ အရေးကြီးသော အချက်ကား ကျွန်မ၏ မြို့ငယ်လေးကို အကြောင်းပြချက်ရေရေရာရာမရှိဘဲ ချစ်သည်။ ကျွန်မတို့ မြို့ငယ်လေးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာမည်မကျော်ကြား မထင်ရှားပါ…မြို့ငယ်လေးမှ သိသိသာသာထင်ရှားအောင်မြင်သော လူငယ်များလည်း မပေါ်ထွန်းခဲ့ပါ…မြို့ငယ်လေးသည် သမိုင်းဝင်မြို့လည်း မဟုတ်ပါ…ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်စရာ ဆန်းပြားကောင်းမွန်သော နေရာများလည်း မရှိပါ…တစ်ခုပဲရှိသည်။ ထိုမြို့ငယ်လေးကို ကျွန်မတို့ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်စုလေး၏ အသည်းနှလုံးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။
မြို့ငယ်လေး၏ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ အများကြီး မျှော်လင့်မထားပါ။ ကျွန်မ၏ တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ချက်က မြို့ငယ်လေးအား ယခုကဲ့သို့ပင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေချင်သည်။ ခေတ်မီစူပါမားကတ်များပေါ်လာဖို့ အင်တာနက်ဆိုင်များပေါ်လာဖို့ အသစ်စက်စက်ကိရိယာများဝယ်ပြီးတပ်ဆင်နိုင်ဖို့ ကျွန်မ မလိုလားမတောင့်တပါ။ ယခုကဲ့သို့ပင် မြို့သူမြို့သားများ အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းကြဖို့၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့လျှင် အပြုံးများ ကူးစက်ကြဖို့၊ စာသင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ စာအံသံများ ညံနေဖို့၊ ညနေခင်းတွင် စေတီလာရောက်ဖူးရင်း အေးအေးဆေးဆေး အပန်းဖြေနိုင်ဖို့၊ ဘောလုံးကွင်းတွင် ပျော်ရွှင်စွာ ပြေးလွှားဆော့ကစားနိုင်ကြစေဖို့ ဒါတွေကိုပဲ ကျွန်မ ရိုးရှင်းစွာ မျှော်လင့်သည်။
ကျွန်မချစ်ခင်မြတ်နိုးရသော မျှော်လင့်ချက် မြို့ငယ်လေးကား ပီအိုင်စီဟု ခေါ်ဝေါ်သော ရေနံစက်ရုံဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်စုလေးပင် ဖြစ်သည်။
Posted by wa lay at 7:49:00 pm
April5October 2011 at 03:41
ဝါလေး .. ချစ်လေးရဲ့ မြို့ ငယ်လေးကို ခုမှပဲ ဖတ်ရတော့တယ် ..
နေချင်စရာမြို့ ငယ်လေးကို ဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်အလည်ရောက်သွားသလိုပဲ ..
ရေးသားချက်ကတော့ ကောင်းလိုက်တာ .. ဒါလင်ရယ် လို့ ပြောရမယ် .. :D
လင့်ခ်လည်း “မ” သွားတယ် .. ဝါလေးရေ ..
meenge 17 May 2012 at 16:25
hi sis I read all ur posts. why do u stop ur writing ? pls continue . love ur writing .. :)
Thu Rein 28 June 2013 at 19:51
Hi, Ma War Lay,
I also from PIC. Thanks for your post about our PIC. Appreciate it.